Wajiyadii hore: waxa ay yihiin, sifooyinka guud iyo isticmaalka joogtada ah | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | 29/04/2022 15:45 | Fuentes, Khayraadka
Waqtiyadii hore, tiro xarfo ah ayaa jiray waxaana loo qaabeeyay ujeeddada abuuritaanka hal-abuuro cusub. Horumarinta tignoolajiyada cusub, qaar badan oo ka mid ah xarfahan ayaa horumaray, sidoo kale naqshadeeyayaasha. Sababtan awgeed, maanta waxaan ka heli karnaa xarfo badan, oo ah dhammaan qaababka iyo naqshadaha suurtagalka ah.
Ma aha wax la filayo in nashqaduhu uu sidoo kale u kobcay si la mid ah sida xarfaha ay sameeyaan, maadaama labada walxood ay gacanta ku hayaan. Qoraalkan, Waxaan u nimid inaan kaala hadalno qoraaladii hore, sida wejiyadani ay uga mid yihiin waxa aynu maanta naqaano, isticmaalkooda iyo sifadooda guud iyo kuwa muuqdaba.
1 Wajiyadii hore: waa maxay?
1.1 Astaamaha iyo Isticmaalka
2 Tusaalooyinka wejiyadii hore
2.1 farshaxanka greco
2.2 Ilaha Roman
2.2.1 Liiska wajiyada Roomaanka
2.3 Wajiyada qarniyadii dhexe iyo Renaissance
2.4 Ilaha qarnigii XNUMXaad iyo XNUMXaad
2.5 Ilaha qarniga XNUMXaad
Wajiyadii hore: waa maxay?
Qoraaladii hore ayaa loo qeexaa, sida eraygoodu tilmaamayo. inay yihiin ilo qadiimi ah oo gaar ah oo ku saabsan kuwa aan naqaanno. Waa far gaar ah marka loo eego naqshadooda. maadaama ay taariikh badan ka dambeeyaan oo ay aad muhiim u tahay in la ogaado si loo fahmo sida loo naqshadeeyay iyo waxa loo adeegsado.
Mararka qaarkood, haddii aan ku soo bandhigno goobta naqshadeynta, waxaan ku dari karnaa in ay yihiin xarfo si aad ah loo isticmaalo suuqgeyn ama isgaarsiin, maadaama ay yihiin kuwo si cad u qeexan oo la fahmi karo. Sidan oo kale, waxaa muhiim ah in lagu daro, in kasta oo ay jiraan da' gaar ah, haddana bini'aadamka, waxaa aad muhiim u ah in maskaxda lagu hayo waxyaalihii hore oo aan waligood si fiican loo sheegin, maadaama habkan aan ku gaari karno mid ka sii weyn. soo jiidasho muuqaal ah oo aan aragno. Tusaale ahaan, noocyada xarfaha ayaa aad ugu habboon haddii aan ku dabaqno dukaamada dhexe, ama dukaamada lagu iibiyo alaabooyinka qaar madmadow leh iwm.
Sababtaas awgeed, waa inaan marnaba sumcadda ka jabin far kasta, si la mid ah odhaahdii caanka ahayd ee ahayd “Buug ha ku xukumina jaldigiisa”, sidaas oo kale ayayna ku dhacdaa xarfaha noocaan ah iyo nashqaddooda oo laga yaabo inay innagala ekaato mid duug ah balse in badan oo aan innagu dhicin. faham in wax kasta oo aan maanta naqaan qayb ka mid ah xididadaas la mid ah.
Waxay yihiin ilo, in kasta oo jaleecada hore aanay u muuqan, haddana inta badan si aad ah uga muuqda wakhtigan xaadirka ah. Tusaalaha aad u gaarka ah waa summadaha. Magacyada qaar waxay u janjeeraan inay adeegsadaan nooc farihii hore sababtoo ah waxay bixiyaan dabeecad iyo cod ka shaqeynaya isha qaawan. Wax yar bay ogyihiin in ay nagu hareeraysan yihiin oo ay nagu hareeraysan yihiin farta noocaan ah meel kasta, hadday tahay dukaanno ama dukaanno waaweyn.
Tobannaan sano, isticmaalkeeda ugu badan ayaa had iyo jeer ahaa qoraalka socda ama cinwaannada waaweyn. In kasta oo ay run tahay in hadda, inta badan qoraallada socda ee aan ka helno buugaagta, waxay ka bilowdaan xarfaha Roman ama sans serif. Laakin Waa in la ogaadaa in, hadda, aan caadi ahaan ku helno calaamado waaweyn, maadaama loo tixgeliyo xarfo aad u cajiib ah.
Ugu dambayn, noocyadan fardaha waxaa laga helaa shatiyo waaweyn qaar ka mid ah bogagga internetka, sidaa darteed ma adka in la helo. maadaama aan ku hayno kumanaan iyo kumanaan bog oo aad ka soo dejisan karto.
Tusaalooyinka wejiyadii hore
Wajiyada Farshaxanka Greco waa xarfahaas ka yimid Giriiggii hore. Waqtigan xaadirka ah, noocyo badan ayaa go'aansaday in ay u isticmaalaan calaamadahooda, iyaga oo aan sii soconin, nooca caanka ah ee yogurts Danone, codsatay naqshad noocan oo kale ah mid ka mid ah alaabteeda, halkaas oo ay tilmaamayso yogurt-ga Giriigga ee caadiga ah.
Waa naqshad si weyn loogu isticmaalo qaybaha sida gastronomy-ga, tan iyo markii ay kiciso oo ay nagu soo qaado dukaamada Giriigga qadiimiga ah ee fagaarayaasha. Shaki la'aan, yaabka naqshadeynta oo naga dhigaya inaan dib ugu soo laabano waqtigii hore.
Xigasho: Nétor Charts
Tusaalaha kale ee caanka ah waa qoraalada Roomaanka. Wajiyada Roomaanku waa xarfaha loo naqshadeeyay dhagxaan xardho. Dhab ahaantii, hadda waa kuwa ugu isticmaalka badan waxaana loo tixgeliyaa xarfaha serif. Naqshadoodu waa mid heersare ah laakiin badanaa waa kuwo la fahmi karo. Sidaa darteed, waxaa laga helaa inta badan qoraallada socodsiinta iyo buugaagta.
Qaarkood waxaa ku jira xarfo waaweyn oo keliya, maadaama xarfo waaweyn oo keliya la xarri jiray. Ilaa hadda sida naqshadeynta noocan oo kale ah, waa in tirooyinka sida caadiga ah ay ku jiraan nambarada Roomaanka. Shaki kuma jiro, il aan waxba ka tagin.
Liiska wajiyada Roomaanka
Wajiyada qarniyadii dhexe iyo Renaissance
Markii ay yimaadeen diimaha sida Masiixiyadda, dhaqanka Roomaanku wuxuu la kulmay hoos u dhac ba'an. Haddaba waxaa la ikhtiraacay oo la sameeyay nashqado iyo xarfo cusub oo la jaan qaadaya duruufaha waagaas jiray. Wajiyada wax lagu qoro waxay noqdeen far aad u wareegsan. Sannado ka dib, waxa aan u naqaannay xarfaha Gothic, kuwaas oo noqday kuwo aad u caan ah wakhtiyadii dhexe. Qaar badan oo ka mid ah xarfahaas waxaa ku jiray xarfo yaryar oo keliya, aad u yar ayaa loo qaabeeyey far waaweyn oo ka duwan xarfaha Roomaanka ee aan kor ku soo aragnay. Shaki la'aan, waqti aad u taariikhi ah.
Ilaha qarnigii XNUMXaad iyo XNUMXaad
Ilaha ayaa sii waday in la abuuro qarniyo halkaas oo classicism la dayactiray oo socday sanado. Waxa kale oo aynu naqaan xarfaha sida xarafka caanka ah ee cursive, kaas oo qarniyadaas noqday farta rasmiga ah.
Sannado ka dib, ka dib markii la alifay daabacaadda. Bodoni iyo tartankiisa ugu weyn, Didot, waxay abuureen xarfo serif oo kala duwan. Hadda xarfahani wali waa shaqaynayaan. Dhab ahaantii, Adobe wuxuu sii wadaa inuu ku sii hayo xirmada font-ka waxayna hore u galeen taariikhda inay ka mid yihiin xarfaha ugu isticmaalka badan. Shaki la'aan, tagtadii ayaa hadhsanaysa hadda.
Ilaha qarniga XNUMXaad
Qarnigii XNUMX-aad waxa ka buuxay wax cusub oo cusub iyo horumar tignoolajiyadeed, sidaa awgeed tiro aan dhammaad lahayn oo cusub oo farmaajo aad u wanaagsan ayaa la naqshadeeyey. Qarnigan waxa uu ka koobnaa adeegsiga xarfaha Gothic iyo cursive, kuwaas oo la noolaa jiilal cusub oo ay ka mid yihiin farmaajo oo lagu sameeyay rasaasta, isticmaalkooda. Sidan oo kale waxay ahaayeen kuwo dhammaystiran oo faahfaahsan si ay si sax ah ugu shaqeeyaan naqshadahooda. Shaki la’aan, yaabka xarfaha maanta la isticmaalo oo wada nool oo innala jiri doona, sannado badan oo kale, shaki la’aan.
Qoraaladii hore waxa ay ku guulaysteen in aynu ka gudubno waxa aynu maanta naqaano oo aynu ognahay.
Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay ilo noocaan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » qoraaladii hore